StaFi na-ama ọkwa ọkwa SSOL Liquidity Ngwọta maka Solana Staking | by Emmanuel Ramsey | Medium
Okwu Mmalite RSOL
rSOL, ngwaahịa DeFi na-enweghị isi nke StaFi mepụtara nke na-edozi nsogbu nke SOL na Solana mainnet.
Ihe ngosi RSOL bụ usoro ihe eji eme ihe na-agbanwe agbanwe nke StaFi nyere mgbe ndị ọrụ jiri SOL site na StaFi rSOL App. RSOL tokens na-arapara n’ahụ akụ SOL na-akwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ kwekọrọ na ya. Enwere ike ịnyefe rSOL tokens ma zụọ ahịa n’oge ọ bụla.
RSOL App nwere ike inyere SOL stakers aka idozi nsogbu abụọ:
1) Ọ gaghị adị mkpa ichere maka oge ụbọchị 3 ga — ewepu akụ ndị ahụ akpọrọ SOL. Ndị ọrụ RSOL nwere ike ịnyefe ma na-azụ ahịa akụ RSOL n’oge ọ bụla iji tọhapụ mmiri mmiri na ihe egwu dị oke ọnụ.
2) Ọ baghị uru ịmụ usoro mgbagwoju anya nke ụlọ elu BFT ma ọ bụ ịgbanye ụgwọ ọrụ ịgbakọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwelata ụgwọ ọrụ. Site na rSOL App, ndị ọrụ kwesịrị ịgbaso usoro ole na ole iji tinye SOL n’ime nkwekọrịta rSOL, nke ga-ahọrọ onye kachasị mma iji nyefee ikike site na atụmatụ uru kachasị.
RSOL / SOLAS Exchange Ọnụego
Mgbe onye ọrụ tinye SOL na nkwekọrịta rSOL, StaFi ga-agbakọ ego rSOL iji nye onye ọrụ dabere na ọnụego mgbanwe ugbu a n’etiti SOL na rSOL. Mgbe onye ọrụ jidere rSOL, StaFi ga-agbakọ ego nke SOL nwere ike ịgbapụta dabere na ụgwọ ọrụ oge nke SOLỌnụego mgbanwe rSOL Ci na-eto na mmụba nke ego na-akpata. A na-ekpebi ya site na ọnụọgụ SOL akpọchiri na nkwekọrịta steepụ Qstk, ọnụọgụ nke SOL Qred gbapụtara, ọnụ ọgụgụ nke staking ụgwọ ọrụ Qrew, ọnụọgụ nke slashes Qslh, ọnụego ọrụ Rcom, ọnụọgụ rSOL nyere M, na ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ọkụ rSOL N. Usoro ịgbakọ usoro a bụ:
Uru Ngwọta RSOL
Site na rSOL, StaFi na-edozi nsogbu ndị a maka ndị nwere SOL:
1) Ọ baghị uru ichegbu onwe gị banyere ịdị ọcha nke SOL. Ndị ọrụ nwere ike zụọ ahịa rSOL na Uniswap n’oge ọ bụla n’ọdịnihu.
2) Usoro nkwekọrịta rSOL na-ejikọ atụmatụ maka iwelata ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ, nke na-ahọrọ otu Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Na-akpaghị aka na ụgwọ ọrụ kachasị elu na yinye.
3) Bzọ ụlọ elu BFT dị ugbu a nke Solana mainnet bụ ihe mgbagwoju anya maka ndị na-ahụ maka nkịtị ka ha mụta, dị ka ịghọta usoro nkwekọrịta, ma a na-anabata izu ike ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị na-ekpebi ụgwọ ọrụ, otu esi ahọrọ ndị nkwado kachasị mma, wdg. RSOL Ngwa nwere ike ịchekwa ndị ọrụ nsogbu a niile, ma bulie ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ chọrọ ịbanye n’agbụ Solana n’otu ụzọ nkwụsị.
RSOL Tinye ndị sonyere
RSOL App na-edozi mmiri nke SOL staking. Ndị isi sonyere bụ ndị a:
Akwụkwọ StaFi roken: https://docs.stafi.io/stafi-whitepaper/rtoken-paper
Dabere na usoro nkwenye nke Tower BFT nke Solana na ihe ndị na-emetụta ụgwọ ọrụ, rSOL App na-agbaso usoro atụmatụ a na-esote oke:
Ndị nnọchi anya dị iche iche
SOL tokens nke ndị ọrụ nọ na ọdọ mmiri StaFi rSOL, nke usoro ntinye aka na-achịkwa, ga-ekesa ya na ọtụtụ (M) obere staking. Akaụntụ ọ bụla ga — ahọrọ ọtụtụ (N) ndị nnọchite anya maka ndị nnọchi anya site na atụmatụ uru uru.
A ga-edozigharị m na nha nke nkwụnye ego SOL, a ga-edobe N na 1 dịka iwu ndị nnọchi anya Solana si dị.
Ndị nnọchi anya dị iche iche ga — enyere aka belata ihe ga — eme nke otu ọnụ, ma mee ka ikike nke ndị ọrụ Solana ghara ịba uru.
2) Họrọ ndị ahọpụtara ndị mbụ bidoro
RSOL App ga-enyocha data arụmọrụ nke ndị na — eme ihe ngosi izizi sitere na igwe okwu gụnyere oge ntanetị, ndekọ slash, njigide onwe, njirimara node, komputa ọrụ, wdg., iji hụ na ahọpụtara ndị nkwado dị mma nwere obere ọrụ. StaFi ga-akwanye ndị nkwado Solana niile aha dịka nyocha nyocha wee họrọ ndị isi M + 5 dị ka ndị na-azọ ọkwa Original.
3) Atụmatụ ndị nnọchi anya na-ewulite nguzozi kwesịrị ekwesị n’etiti ụgwọ ọrụ dị oke elu na ịba ụba nke ndị nkwado Solana
Nkwekọrịta StaFi rSOL ga na-enyocha ike M + 5 OV nke ndị na-eme ntuli aka ma nwetakwa ikike M + 5 OV dịka ikike si dị ala site na ala ruo elu na ọkwa ọ bụla, wee họrọ ndị kachasị dị ala M dị ka ndị ọrụ gọọmentị OV ga-ekenye ndị ọzọ.
4) Usoro nke belata ihe nwere ike imebi
Mgbe sistemụ ahụ chọpụtara na ọnụ ya adaala ma ọ bụ ọnụego ntanetị dị ala karịa ọkọlọtọ ahụ, nkwekọrịta rSOL ga-ebido ọrụ mgbapụta ahụ wee họrọ ndị ọzọ ruru eru na ndị M + 5 OV maka ndị nnọchi anya.
Ndị ọrụ nwere ike ịgbapụta SOL ahụ siri ike na ụgwọ ọrụ kwekọrọ n’oge ọ bụla site na rSOL App. Mgbe ha natasịrị arịrịọ mgbapụta, nkwekọrịta rSOL ga-akpaghị aka wee wepu SOLs na yinye Solana, wee ziga SOL tokens na adreesị Solana nke onye ọrụ ahụ mgbe ụbọchị abụọ nke Solana gasịrị, nke nwere ike ịbụ ihe dị ka ụbọchị 5.
Mgbe ndị ọrụ gbapụta SOLs, a ga-akwụ ụgwọ mgbapụta na 0.2%, nke edepụtara nkọwa ndị ahụ na isi okwu RSOL Charge.
Agbanyeghị na arụ ọrụ nke Slashing na Solana Manet Beta yinye, etinyelarị nkwekọrịta StaFi rSOL na atụmatụ iji belata ihe egwu dị na ya.
Site na rSOL, StaFi nwere ike inyere ndị ọrụ aka izere igbu ndị n’ụzọ ndị a:
1) Igha nkwekorita na-akwado ndi nkwado a na-enweghi ihe omuma nke ibu ibu OV.
2) A ga-ahọrọ ndị na-eme ihe ngosi nwere oke nke onwe maka OV ka OV wee nwee ike ime ka OV ghara ịdị na-egbu egbu.
3) Nkwekọrịta steepụ ga-ahọrọ ọtụtụ OV maka nhọpụta ọ bụla ka ụfọdụ OV a kụrụ akụ ghara inwe nnukwu mmetụta na ego onye ọrụ ma ọ bụrụ na ọ daa. Yabụ, ọbụlagodi na a na-akụda OV (ihe gbasara nke puru iche), a gaghị emetụta ụgwọ ọrụ na-akwụ ụgwọ.
4) Mgbe achọpụtara igbu egbu n’elu oghere ndị enyere ndị ọrụ, nkwekọrịta rSOL ga-eme mgbapụta ozugbo n’elu ọnụ dị n’elu iji belata mfu ahụ.
Ndị ọrụ adịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ siri ike mgbe ha na-eji rSOL App, na nkwekọrịta na-aga n’ihu ga-enwetaghachi ụgwọ ọrụ iji mepụta APR dị elu
1) Mint rSOL
Mgbe onye ọrụ jiri mints rSOL, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ akwa obe ga-enyocha ọrụ Solana na-aga n’ihu na ịkwụ ụgwọ ụgwọ metụtara ụgwọ. Ya mere, enwere ike gbakọọ ọrụ ahụ na Mbelata rSOL site na usoro a: N * (StaFi yinye Gas Fee + Solana Chain Gas Fee), a na-akwụkwa ụgwọ site n’aka FIS, StaFi mainnet toke.
N bụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe:
1) N’ọtụtụ oge, N atọrọ ka 2. N’okpuru ọnọdụ a, onye ọrụ ga-akwụ ụgwọ gas ugboro abụọ n’agbụ abụọ ahụ ka ụgwọ ọrụ maka ọnụ ụzọ ọrụ obe.
2) Agbanyeghị, mgbe enwere mwakpo uzuzu ugboro ugboro, StaFi ga-eme ka N dị elu iji nwekwuo ọnụ ahịa mwakpo obi ọjọọ. Mgbe mwakpo ahụ kwụsịrị, a ga-eweghachi N ka ọ bụrụ mmadụ abụọ.
2) stakinglọ ọrụ
RSOL App ga-anata ụgwọ ọrụ nke staker na-akwụ ụgwọ dị ka ọrụ ahụ, nke gụnyere kọmitii nke onye ọrụ nkwado na StaFi boro ebubo. Commissionlọ ọrụ nke StaFi na Original Validators anakọtara agaghị agafe 20% nke inweta ụgwọ ọrụ zuru ezu.
3) Buru rToken
Mgbe onye ọrụ gbakụtara akụ na-echekwa akụ, ọ ga-achọ naanị maka mgbapụta na dashboard staFi. Usoro mgbapụta na-ekewa ụzọ abụọ:
Kwụpụ 1: Tinye ego rSOL, nke na-enweghị ike ịgafe nguzo rSOL gị.
Kwụpụ 2: Kwenye ma tinye n’ọrụ. Usoro a ga-agba rSOL akara ị tinyere n’ọrụ, wee gbakọọ ego nke SOL nwere ike ịgbapụta site na ọnụego mgbanwe. A ga-eziga ego ahụ, mgbe iwepuchara ụgwọ ọrụ ọrụ ya na adreesị obere akpa onye ọrụ ahụ.
A na-ekpebi ụgwọ ọrụ ahụ (Fered) site na ntinye aka nke ndị ọrụ maka mgbapụta M, ọnụego mgbanwe RSOL / SOLAS dị ugbu a, yana mgbapụta Rr:
Rr ka atọrọ ugbua na 0.2% na ọkwa mbu.
Mgbasa Ozi Secondary Market nke rSOL
StaFi ga -emepụta ọnọdụ mgbasa ozi ga-aba ụba, nke na-agbatị n’agbụ dị iche iche maka ndị na-ejide rSOL:
1) Mgbe emeputara rSOL App, rBridge ga-akwado otu ọrụ rSOL ụzọ abụọ ga — esi na StaFi yinye na Ehereum, ka ndị ọrụ wee nwee ike ịnweta ngwa DeFi na Etherum site na iji rBridge App.
2) N’oge na-adịghị anya, StaFi ga-edepụta rSOL tokens na DEXes nke Solana yinye dịka Saber na Serum, ma wepụta mkpọsa na-eme ka ndị mmadụ na-egwu mmiri iji hụ na mmiri dị n’otu.
3) StaFi agaghị akwado naanị mgbasa nke rSOL na gburugburu Solana kamakwa na-enye ike rSOL itinye aka na DeFi protocol nke Etherum / Polkadot / BSC n’agbụ site na ọrụ akwa mmiri.
StaFi bụ usoro izizi nke DeFi na-emeghe oghere nke akụ ndị siri ike. Ndị ọrụ nwere ike itinye ihe nrịba ama PoS site na StaFi ma nata rTokens na nloghachi, nke dị maka azụmaahịa, ebe ha ka na-enweta ụgwọ ọrụ siri ike. roToken bụ usoro sitere na staFi nyere ndị ọrụ mgbe ndị ọrụ jiri PoS tokens gafee StaFi rToken App (https: // app.stafi.io). A na-egbochi ndị mmadụ ihe ngosi PoS na ihe nrịba ama ndị ọrụ na ụgwọ ọrụ kwekọrọ na ya. Enwere ike ịnyefe rTokens ma zụọ ahịa n’oge ọ bụla